बैंकमा बढ्यो खराब कर्जा, जम्मा गरेको पैसा के हुन्छ ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
बैंकमा बढ्यो खराब कर्जा, जम्मा गरेको पैसा के हुन्छ ?
काठमाडौं । देशभरका बैंकहरूमा चार वर्षको अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ पूँजी थपिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धि गर्ने नीति ल्याएपछि बैंकिङ प्रणालीमा पूँजी थपिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ३० खर्ब १ अर्र्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०७२ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी १ खर्ब ४१ अर्र्ब ६ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसयता चार वर्षको अन्तरालमा बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब ६० अर्र्ब ३ करोड रुपैयाँ थपिएको हो । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजीको पछिल्लो अवस्था सार्वजनिक गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी २ खर्ब ४७ अर्र्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असार मसान्तमा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी २ खर्ब ८२ अर्र्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको २ खर्ब ३१ अर्र्ब ५ करोड रुपैयाँ, विकास बैंकहरूको ३८ अर्र्ब रुपैयाँ तथा वित्तीय कम्पनीको १३ अर्र्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
२०७२ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी ९८ अर्र्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो । चार वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकको पुँजी १ खर्ब ४९ अर्र्ब ३ करोड रुपैयाँ बढेको छ । विकास बैंकहरूको चुक्ता पूँजी ३९ अर्र्ब ९ करोड रुपैयाँ तथा वित्त कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी १४ अर्र्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले आठ गुणाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको तुलनामा कर्जा बढी लगानी गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलनमा भएको वृद्धिभन्दा कर्जा विस्तार बढी भएकाले लगानीयोग्य साधनमा दबाब कायमै रहेको जनाएको छ । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह बढी भएकाले वित्तीय स्थायित्व प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहेको राष्ट्र बैंकले सो समीक्षामा भनेको छ ।
चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप १० दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप १० दशमलव १ प्रतिशतले बढेको थियो । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १६ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो ।
बैंकहरूको खराब कर्जाको मात्रा पनि बढेको देखिएको छ, अहिले आक्रमक रणनीतिले ऋण विस्तार उच्च छ । २०७४ असारमा खराब ऋण १६ अर्ब थियो । २०७५ असारमा पनि १६ अर्ब नै थियो । तर २०७५ को चैतसम्म आइपुग्दा बढेर २१ अर्ब पुगेको देखिएको छ । यस अवधिमा बैंकहरूको लगानी २४ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २०७४ असारसम्म बैंक ऋण १७ खर्ब ३६ अर्ब थियो ।
क्याटरिन किन निराश छिन्?
एजेन्सी, क्याटरिना कैफ र रणविर कपुरको ब्रेकअपको अनुमानका बिच क्याटरिना कैफले आफ्नो निजी जीवनका समाचारहरु […]
काठमाडौं । कोरिया सरकार कामदारलाई नयाँ नियम ल्याएको छ । कोरिया सरकारले ल्याएको यस नियमले आफ्नो कार्यकाल पुरा […]
तोरी फूलको सुन्दरता
काठमाडौको थानकोट स्थित गोदाम गाँउमा फुलेको तोरी ।तस्बिर :असनेपाल न्युज […]
निर्यात बढ्दै, आयात घट्दै : निर्यातमा पाम आयलको हिस्सा धेरै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै मुलुकको व्यापार घाटा सुधारिदै गएको छ। आर्थिक वर्षको […]
वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्ब भ्रष्टाचार ठहर, पर्यटन मन्त्री सहित दुईजना पूर्वमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सिफारिस